भोलि कार्तिक १३ गते मंगलबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल! - पलपलका खबर
भोलि कार्तिक १३ गते मंगलबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
October 29, 2018 - by Palpalka Khabar - LeaveaComment
भोलिको दिन तपाईको मिश्रित फलदायी हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको आर्थिक आय र व्यय बारबार हुने दिन परेको छ। भोलि तपाईको यात्रा सफल हुने भएता पनि स्वास्थ्यले भने खासै साथ नदिन सक्ला। व्यवसाय र जागिर स्थलमा भोलि तपाईको दुर्व्यवहारको सामना गर्नु पर्न सक्ला।
भोलि तपाई अनिर्णायकताको कारण तनावमा हुनुहुने देखिन्छ। समयमा निर्णय गर्न नसक्दा ठूलै काम फुत्किनेछ। भोलि काममा मन लाग्नेछैन। भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा आर्थिक लगानी नगरेकै उची हुनेछ। भोलि स्वास्थ्यले पनि साथ नदिने भोलिको दिनमा अध्ययनमा पनि मन जानेछैन।
भोलिको दिन तपाईको धेरै खुसीका साथ शुरु हुने देखिन्छ। मन आनन्दित हुने देखिन्छ भने स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ला। प्रेमीबाट उपहार मिल्न सक्ने भोलिको दिनमा तपाइलाई परिवारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्य थालनीको लागि दिन धेरै शुभ रहेको छ।
भोलि तपाई मानसिक अस्वस्थता अनुभव गर्नु हुनेछ भने शरीरमा पनि कान्तिको कमि रहन सक्ला। भोलि तपाईले आर्थिक कार्य गर्दा संयमता अपनाउनु होला। आफ्नैले ढोका दिन सक्ने हुँदा संयम रहनु पर्न सक्ला। पारिवारिक कार्यको लागि खर्च बढ्नेछ। अध्ययनमा असफलता हात लाग्न सक्ला।
भोलिको दिन तपाईको लागि धेरै शुभ फलदायी हुने देखिन्छ। भोलि भोलि पहिलेका कर्मयोगबाट विशेष फल प्राप्त हुन सक्ला। दुविधापूर्ण मानसिकता हुने भएता पनि परिवारबाट उचित मार्गदर्शन मिल्नेछ। भोलि विदेश देखि शुभ समाचार आउन सक्ला। तपाईमा आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ।
भोलि साझेदारीबाट लाभ मिल्नुका साथै जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ। प्रतीक्षित नतिजा उत्साहप्रद रहने भोलिको दिन तपाईको लागि एकदमै राम्रो रहने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई सार्वजनिक मान-सम्मान मिल्ने देखिन्छ। भोलि दैनिकीबाट टाढा रहेर मनोरन्जनमा जुट्ने अवसर मिल्न सक्ला। भोलि तपाईको प्रतिपक्षीहरू पराजित रहने देखिन्छ।
भोलि रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् भने मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउने देखिन्छ। आर्थिक मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि भोलि तपाईलाई लाभ प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुँदा कार्य फत्ते गर्ने जाँगर प्राप्त हुनेछ। भोलि सानो प्रयत्नले धेरैको भलाइ हुने देखिन्छ। यात्रा सफल हुनेछ।
भोलि स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। भोलि टाढाको यात्रा नगरेकै उचित हुनेछ भने आफ्नैले धोका दिन सक्ने हुँदा संयम रहनु होला। चिताएको कार्य सम्पन्न नहुँदा मनमा अशान्ति छाउने देखिन्छ। भोलि नयाँ कार्य थालनी नगरेकै उचित हुन सक्ला। खर्च र चुनौतीको समय रहनेछ।
भोलिको दिन तपाईको धेरै आनन्द र शान्तिपूर्वक व्यतित हुनेछ। भोलि चुनौतीहरू पन्छाउँदै चिताएको काम सफल बनाउन सफल हुनुहुनेछ। भोलि तपाईको आम्दानी बढाउने काम सुरु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई काममा आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग मिल्ने दिन परेको छ। अनुसूचित कार्य पूरा हुनेछ। भोलि आय वृद्धि हुनेछ।
तपाई व्यवसाय भोलि विस्तार गर्न तिर अग्रसर हुनुहुनेछ भने भोलि तपाईलाई अफंताहरुबाट आर्थिक सहयोग पनि प्राप्त हुन सक्ला। तपाईलाई भोलि लगनशीलताले बिस्तारै लक्ष्यमा पुर्याउन सक्छ। भोलि परिवारमा पनि आनन्दको वातावरण हुन सक्ला। धेरै समय देखि भेट नभएका मित्रजनसँग भेट हुनेछ।
भोलि तपाई कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनीमा नजुट्नु होला। साथै अभोलि तपाईले कुनै पनि आर्थिक कार्य नगरेकै उचित हुनेछ। यात्रा गर्नको लागि पनि भोलिको दिन खासै शुभ छैन। सृजनात्मक कार्यमा भने भोलि उल्लेख्य प्रगति हुनेछ। आफन्त देखि सावधान रहनु होला। अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
भोलि तपाई अरूका काममा धेरै समय व्यतीत गर्न वाध्य हुनुहुनेछ भने भोलि तपाई अरुको कारण आलोचित हुनुहुने देखिन्छ। शत्रुसँग मात्र नभई भोलि मित्रसँग पनि समयमा रहनु होला। खान-पानमा ध्यान नदिँदा दुख मिल्न सक्ला। सोचे अनुरुप दिन व्यतित नहुँदा मनमा अशान्ति छाउनेछ।
परदेशीका बुवाआमाको गुनासो: ‘बुहारीसँग घण्टौं कुरा गर्ने छोरा हामीसँग किन बोल्दैन!
भोलि कार्तिक २७ गते मंगलबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
भोलि तपाईको दिन कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस भोलि कार्तिक २६ गतेको राशिफल!
November 11, 2018 November 27, 2018
Previous Article भोलि कार्तिक ११ गते आइतबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
Next Article विश्वकै अनौठो देश : जहाँको जनसंख्या छ जम्मा २९ जनाको, राष्ट्रपतिले नै पर्यटकलाई घुमाउन निस्किन्छन्
About Palpalka Khabar
View all posts by Palpalka Khabar →
आज ह्वात्तै घट्यो सुन चाँदीको मूल्य
गलत आरोपले इज्जतमा दाग लाग्यो भन्दै रोईन् प्रियंका, गल्ती नभएको भन्दै देखाईन् यस्तो प्रमाण (भिडियो)
रणवीर र आलिया भट्टले गुपचुप विवाह गरेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल
११ वर्षिया भाइरल नानीको सपना पुरा हुने भएपछि भक्कानिएर रोईन दोहोरीमै, इन्द्रेणीमा गीत गाउदै!
Copyright © 2019 पलपलका खबर.